समुद्री अाँधीकाे नामाकरण कसरी हुन्छ ?
हुदहुद समुद्री आधीको नाम हो । के तपाईंलाई थाहा छ ? हुदहुद नाम कसरी रहन गयो ? समुद्री आँधीको नाम राख्ने बिधि के हो ? यो कसले राख्छ ? के जान्न चाहनुहुन्छ ?
समुद्री आधी प्रभावित मुलुकहरुले यसको नाम जुराउने गर्दछन् । तथापि दक्षिण एशियामा यो प्रचलन सन् २००४ सम्म पनि थिएन । समुद्री आधीहरु बेनामे नै रहने गर्दथे । कारण के थियो भने यो क्षेत्र निकै धेरै धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा बिभिन्नता रहेको बहुलता रहेको क्षेत्र भएको हुँदा एक देशले कुनै नाम दिँदा कुनै जातिपाति वा संस्कृतीको लागि नराम्रो अर्थ लाग्ने हुन सक्दथ्यो । सन् २००४ पश्चात WMO को समन्वयमा यो क्षेत्रका ८ मुलुकहरु भारत, पाकिस्तान, बंगालादेश, ओमान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइलैन्ड विच एक सहमति बन्यो । कुनै पनि नयाँ समुद्री आँधी आउनु पूर्व त्यसको नाम जुराइ सक्ने, सो को लागि प्रत्येक मुलुकले प्रत्येक बर्ष ८ वटा नाम सिफारिस गर्ने गर्दछन् । ती नामहरुले कुनै पनि मुलुकको धर्म संस्कृति तथा भाषिक रुपमा नकारात्मक सन्देश दिने हुनु हुँदैन । प्रत्येक बर्ष बर्णानुक्रमका आधारमा राष्ट्रहरुको नामाकरणको पालो आउँछ । सोहि अनुसार नामाकरण गरिन्छ । संयुक्त बैठकबाट त्यसकाे अन्तिम छनाैट गर्दछन् ।
हुदहुद कसरी रह्यो त ?
यो नाम ओमानले राखेको हो । हुपु ( Hoopoe) एक सुन्दर चरा जुन यूरोप, एशिया र उत्तर अफ्रिकामा पाइन्छ सोही चराको नामबाट यो नाम राखिएको थियो । समुद्री आँधी एक बिनासक नकारात्मक घटना भए पनि यसलाई सुन्दर चराको रुपमा चित्रण गरेर सकारात्मक सन्देश फैल्याउन यो नाम राखिएको भनाइ ओमनको रहेको देखिन्छ ।
1 Career News and Info चैत्र १७, २०७३
2 क्षेत्रफलका आधारमा ६ ठूला/ साना जिल्लाहरू
6 सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभाग गठन
7 Career News and Info असार ६, २०७४
10 साइटिस ( CITES) भनेको के हो ?